February 2015 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
တောက အမျုိးသမီးကြီးတစ်ယောက် မြို့ရောက်လာတော့ တက်စီငှားတယ်... ...
"ကားဆရာ... ဗိုလ်ချုပ်ဈေး သွားမလား"
"သွားမယ်လေ၊ ၄၀၀၀ ကျမယ်"
... ဆိုပြီး သွားကြတယ်။
Sanda Zaw Teet
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ Facebook ပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နေတာထက် အခြား ဗဟုသုတ ရနိုးနိုး ဝဘ်ဆိုဒ်လေးတွေဆီ သွားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လက်ရှိ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် TED မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် ၁၀၀ စာရင်းကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ရ ပါတယ်။
ဘဏ်ငွေထုတ်စက် (ATM) တွေ မြန်မာပြည်မှာ အသုံးများကြပြီလားဗျ။
မြန်မာပြည်မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဘယ်မှာနေနေ အရေးအကြောင်းဆိုရင် ATM စက်တွေနဲ့
ပါတ်သက်ပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ပြောမယ်ဗျ။
ATM ငွေထုတ်စက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး အဖြစ်အများဆုံး ကိုယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်
ကတော့ ငွေ ထုတ်နေတုန်း နောက်က ဒါးထောက်လုတာပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လောကကြီးမှာ လူဖြစ်ရတာခြင်းအတူတူ ဒီထဲကမှ မိန်းမသားဖြစ်ရတာခြင်းအတူတူ အောင်မြင်မှုမတူ ဘာကြောင့်များ အခြေနေတွေ ကွာခြားနေရတာပါလဲ။ အောင်မြင်ထင်ရှား မိန်းမသားတွေ ကတော့ အောက်ပါ အချက်အလက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိစေဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) ထူးကဲတဲ့ ဝီရိယရှိကြတယ်
Virus ဖန်တီးခြင်းတွေပဲတင်ဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။ Virus ကာကွယ်ခြင်းအပိုင်းကိုတော့ အခုမှပဲ တင်ဖြစ်တော့တယ်။ ဒီ Post မှာတော့ Virus ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Trojans, Worms , Searchbars , Spyware နဲ့ အခြား Malware ပါဝင်တယ်လို့ မှတ်ယူရပါလိမ့်မယ်... Virus ရန်ကနေ ကာကွယ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေကို အထူးသတိထား ဖို့တော့ လိုပါတယ်....
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အပတ်စဉ် updates တွေကို စစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ Operation System အတွက်တွေ့ရှိထားတဲ့ အားနည်းချက်များနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆုံးသတင်း အချက်အလက်တွေကို ရရှိဖို့ မျက်စိဖွင့် နားစွင့် ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံတွေက သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပြောပြနေတာ သင်သိပါရဲ့လား
Girls' Dream Online Shopping
သင့် နှဖူး၊ နှာခေါင်း၊ပါး၊နားနဲ့ မေးစေ့ဝန်းကျင်တွေမှာ ၀က်ခြံတွေ မကြာခဏပေါက်တတ်ပါသလား။ သင့်နှဖူး အပေါ်ဖက် ဆံစတစ်ဝိုက်မှာ ၀က်ခြံပေါက်ခြင်းဟာ သင့်အစာအိမ်ရဲ့ အစာခြေဖျက်မှုစွမ်းအင်နဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ၀က်ခြံပျောက်ကင်းစေဖို့ အစာခြေဖျက်အား ကောင်းစေမဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ရီသီး၊ သံပရာရည်နဲ့ Green Tea တို့ကို များများစားသောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်စု ဘီယာတွင် အမျိုးသမီး ဟော်
မုန်း အနည်းငယ် ပါသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ယင်းအချက်ကို ယောက်ျား
အယောက်တစ်ရာ အား တစ်ယောက်လျှင် ဘီယာ ၁၂ ပိုင့် စီ တိုက်၍ ယင်းတို့၏
အပြုအမူကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ -
- တစ်ရာ ရာခုန်နှုန်း လုံး သည် အလေးချိန်တက်လာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ကသောင်း ကနင်းဖြစ်မှု၊ ကြွေးမြီကိစ္စတွေကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် အရာရှိများက ကူညီဖြေရှင်းပေးဖို့ စတင်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ်တခုလုံး ချော်ထွက်သွားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း သတိထားကြဖို့ ဆော်ဩနေတာကို ကြားနေရပါတယ်။
ရှမ်းပြည် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ စည်းဝေး
အမေရိကန် ဘလော့ဂါ ဒါကာမှာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရ
အိမ်ဖော်ကို နှိပ်စက်တဲ့ ဟောင်ကောင် အမျိုးသမီး ထောင် ၆ နှစ်ကျ
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆန်းအောင်အဖွဲ့နှင့် အစိုးရစစ်တပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
အီရတ် ပြတိုက်က ရှေးဟောင်းရုပ်ထုကို IS ဖျက်ဆီး
နမ့်ခမ်းမြို့ဒေသခံများစုပေါင်းပြီး တရုတ်ပို့မည့် သတ္တုကျောက်တင် ကားများအား ပိတ်ပင်တားဆီး
ထားဝယ်အမျိုးသမီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှောင့်ယှက် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် စာခိုးချရန် အထူးပြင်ဆင်ထားသော စာအုပ်စာရွက်များအရောင်းသွက်
ဆေးရုံဝန်ထမ်းမဟုတ်သော ဆရာဝန် ၀င်ရောက်ခွဲစိတ်ခဲ့ရာမှ မွေးလူနာတဦး အသက်ဆုံးရှုံး
မုံရွာတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကြောင့် အစုအပြုံလိုက် သေဆုံး၊ သယ်ယူခွင့်ပိတ်
တိုက်ခိုက်ခံ စပိန် ခရီးသွားဧည့်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့ရှာဖွေနေ
ဝါရှင်တန် မြို့တော် ဆေးခြောက် အကန့်အသတ်ဖြင့် ခွင့်ပြု
ဆန္ဒပြအလုပ်သမားများအား ဆူပူအကြမ်းဖက်သူအဖြစ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ၌ ဖော်ပြမှုများ ဝေဖန်ခံရ
အလုပ်သမားသပိတ် ဘာကြောင့် ရှေ့ဆက်နေရလဲ …
ကလေးတစ်ယောက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် အတွင်းဝင်လာသည်။ ဆံပင်ညှပ်ဆရာ
က သူ့ဖောက်သည်ကို တိုးတိုး လေးကပ်ပြောသည်။
"ကြည့်ဗျ . . . ကမ္ဘာမှာ ဒီလောက်တုံးတဲ့ ကလေးမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့
ဖူးဘူး။ ကြည့်နေ ကျနော်ပြမယ်။"
ဆံပင်ညှပ်ဆရာသည် လက်တစ်ဖက်တွင် အကြွေ ဆင့် ၅၀ ကိုကိုင်၍
တစ်ဖက်က ၁ဒေါ်လာတန် ငွေစက္ကူကို ကိုင်ထားသည်။ ပြီးနောက် ကလေး
Brainwave ဥာဏ်လှိုင်း added4new photos.
လက်တင်အမေရိက ရှိ ဟေတီကျွန်းနိူင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဂျန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်က မြေငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့မှုကြောင့် လူ ၂ သိန်း ခန့်သေဆုံးပြီး ၁.၅ သန်း အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ စဖြစ်သည့် အချိန်မှ နောက် ၃ နှစ်အတွင်း နိူင်ငံတကာရှိ အလှုရှင်နိူင်ငံများ၏ စုစုပေါင်း လှုဒါန်းငွေသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၉.၅ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး အမေရိကန်သမတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်၍ ကယ်ဆယ်နေရာ ချထားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်းကို အင်အားသုံးဖယ်ရှား၊ ၁၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲ
လူကိုကူးစက်နိုင်သည့် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ မုံရွာတွင် ဖြစ်ပွား
လေးပွင့်ဆိုင် သဘောတူညီချက် လက်မခံဖို့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သဘောထား လျှို့ဝှက်ဖြန့်ဝေ
အာဖဂန် နှင်းထုပြိုကျမှု လူ ၂၀ဝ ခန့် သေဆုံး
ခေါင်းဖြတ်တဲ့ IS စစ်သွေးကြွကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
ISIS လက်မရွံ့လူသတ်သမား ဂျီဟတ်ဒီဂျွန် ဘယ်သူလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ
လောက်ကိုင်ဒေသတွင် ကလေးတဦး မိုင်းနင်း သေဆုံး
မီးလောင်ကျွမ်း ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် အမျိုးသမီး ၀တ်ဆင်လာသော လက်ဝတ် လက်စားများမှာ စိန်အစစ်များဖြစ်နေ
(၁၀၅) မိုင်အနီး မိုင်းခွဲခံရ မှုကြောင့် မန်းမှ မူဆယ်သို့ ကုန်စည် ပို့ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်း
သီချင်းဆိုရင်း စင်မြင့်ပေါ်က လိမ့်ကျခဲ့တဲ့ Madonna
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း အပြင်ဘက်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလောင်း တွေ့ရှိ
တရုတ်သံရုံး ဆန္ဒပြသူတွေ ထပ်မံထောင်ချခံရ
မေး- ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေရှင်း နဲ.ပတ်သက်ပြီး ဥပမာ တစ်ခုပေးပါ
ဖြေ -- ဒိုင်ယာနာက အင်္ဂလိပ်မင်းသမီး၊ သူ.ရည်စားက အီဂျစ်၊ စီးတဲ.ကားက ဂျာမာန်ကား၊ အဲဒီကား အင်ဂှင်က ဒတ်ခ်ျအင်ဂျင်၊ဒရိုင်ဘာက ဘယ်လ်ဂျီယန်၊ ဒီဒရိုင်ဘာက စကော.၀ီစကီတွေ အလွန်အကျွံ သောက်ပြီး မူးပြီးမောင်းလို. ပြင်သစ် တူးမြောင်းထဲ ကျသွားရော၊ သူတို.နောက်က အနီးကပ် လိုက်နေသူတွေက အီတလီက သတင်းဓာတ်ပုံသမားတွေ၊
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ လူငယ်ဟာ Zach Zeiler လို့ အမည်ရပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မစ်ချီဂန်ပြည်နယ်က မြို့တစ်ခုမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်သား ဘဝတုန်းက ကင်ဆာရောဂါရဲ့ ဆိုးရွားမှုကြောင့် ဆေးရုံ တက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါဟာ အသက် အန္တရာယ်ပေးတဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့ပြီး ယနေ့မှာ သူ ကာယဗလမောင် ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်တောင် ထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူက “ နေ့တိုင်း ကုသိုလ်ဖြစ်စေရမယ်” လို့ အဓိဌာန်ပြီး
ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို အိမ်မှာ ဆွမ်းခံကြွစေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆွမ်းလောင်းလှူလာလိုက်တာ ကာလတစ်ခုမှာတော့ သူတို့ရက်ကွက်ကို သူခိုးသူဝှက်တွေ မကြာခဏ လာလာကပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇနီးလုပ်သူက အိမ်ခြံဝင်းတံခါးကို အမြဲ ပိတ်ခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။